Kuloo nto nje ungahambi namantombazana amnandi ukuba ujonge ubuhle kwaye ukhangele. Balambile ngokwabo. Ngaba i-irradiated ngokukhanya kwe-ultraviolet. Ukutshutshiswa ngokuzenzekelayo zonke iindidi zeendawo zomzimba. Uludwe lweenkqubo zobusuku buya kuqhubeka ngonaphakade. Kodwa iindlela ezintle zokuvuselela zingabalelwa kwiminwe. Kwaye enye yezona "zinandi" kakhulu ziyi-chocolate. Ngenxa yobumnandi balo, inokuthelekiswa ne-chemotherapy kunye ne-milk-cream bath.
Ukuthungwa kweShokoleta ngoku kuyafashisa kwaye kuyathandwa kakhulu. Abahlobo bomlomo bayabelana ngentshiseko, bekhanga abalandeli abatsha bale ndlela. Amanoni amaninzi anika inkqubo yetshokolethi. Ukunika abantu uvuyo, ukutshatyalaliswa komzimba kunye nomoya omnandi.
I-chocolate eyona nto isebenzayo ekulwa ne cellulite. I-Cosmetologists idibanise imfihlelo yendalo yetshokolethi ize ibathumele kwinkonzo yoluntu. Isebenza ukuhlanganiswa kwe-elastin kunye ne-collagen. Ikhupha isikhumba esibucayi, siyihlaziye, siyondla nge-microele actives.
Ngaphantsi kwe-anti-cellulite i-chocolate we-chocolate, i-metabolism yangaphantsi iyasebenza. Iiseli ze-Fat zahlula, kunye ne-orange peel engafanelekanga kwimimandla engxaki.
Inkqubo ye-chocolate-wraps iya kwiinqanaba eziliqela.
Kwisigaba sokuqala, ukuxilwa komzimba okhethekileyo kwenziwa. Ngokuqhelekileyo kunye nokusetyenziswa kweoli ye-chocolate. Emva kokuba amathambo ethu afudumele kakuhle, kwaye izihlunu zifudumala, sekuyisikhathi sokutsalwa. Ubani inqubo yokupasa ifana nayo. Ngubani ke ongekho. Kodwa ukuxubusha kuyadingeka ngokuqinisekileyo. Izikali ezikhudlwana zesikhumba zisuswe, kulula ukuba izinto eziphilayo zisebenzise i-epithelium. Njengesihlwitha, imixube eyahlukeneyo ingasetyenziswa. Ulwandle olumnyama, udongwe olubomvu, i-tsokolate, okanye ukudibanisa kwalo. Kuxhomekeke kwingcamango yabasebenzi be-salon ye-spa.
Emva kokuqhawula isikhumba esikhulileyo, iingxaki zeengxaki zityhutywe kunye nekhampani ekhethekileyo. Olu lwakhiwo lukhawuleza ukuphuka kwamanqatha angaphantsi, eyona nto iphambili ye-cellulite. Ngaphandle kwesi sigaba, inkqubo yetshokolethi ayiyi kusebenza.
Kwaye ngoku siyakwazi ukuqhubela phambili kwi-chocolate-sophisticle. Kufuneka kuthathelwe ukuba inqwaba ye-chocolate isilungiselelwe ngokwe-recipe yetshokolethi yangempela. Kuphela ukhohlwa ukufaka ushukela. Ubuninzi bomshokoleta lusetyenziswa ngokunyakaza okulula. Musa ukuhlamba.
Ukufudumala umzimba, wubungele ngefilimu uze uqweqwe ngamathambo. Ukususela kulo mzuzwana, isiqingatha esona sifanelekileyo seyure. Khawucinge nje ngeemvakalelo ezithuthukisa izinyo! Nangona isigulane singenamdla kumnandi, iphunga lecocoa liya kuvuselela iimvakalelo eziphakamileyo.
Ngoko ke yintoni ukusebenzisa i-chocolate yarns?
- Okokuqala, kuya kuba ne-cellulite encinane. Inkqubo ibonakaliswe ngotoni kunye nefutololitiki.
- Ukusetyenziswa kokuqala kwe-elastin kunye ne-collagen.
- Ulusu luba lukhulu kwaye luqiniswe, njengengane. Icoleta inomphumela wokuhlaziya ngokucacileyo. Iziqendu ezingaphantsi zizaliswe zizinto eziphilayo.
Kodwa nokuba unkosikazi yesikhumba esilungileyo, musa ukukhawuleza ukushiya inkqubo enomtsalane. Ukwelashwa kweTokorale kukunika umonakalo omhle, uvakalelo oluhle. Zonke iinkxalabo zakho kunye nokungabaza kuya kunciphisa. Kwaye ulusu luya kunuka iphunga elicocekileyo leshokoledi, ukuqhubhisa abantu abantu.
Zinike iholide encinane. Pamper umzimba wakho oxabisekileyo, ufanelwe. Zama i-chocolate yimbole, kwaye unokuziqhenya ngokuthi: "Ndenze!".
Umzimba omhle kwaye ulungele kakuhle
Ukulungiswa kohlobo lwemilenze
Indlela yokwenza umzimba omuhle ekhaya
Ukunyamekela umntwana osanda kuzalwa, iingxaki ezinokwenzeka
Indlela yokusebenzisa ukutya kwiimvuthu ukukhulisa umntwana
Ukuxazulula iingxaki ngamandla
Ukutya okunempilo kumfazi, iingcebiso
Imizimba ye-Physiotherapy - isethi yokuzilolonga
Iitatayi zinyuka kunye nenkukhu
Indlela yokukhetha ifomula yomntwana
I-pancake ye-Honey nge-apple "eyintloko"
I-Horoscope ye-2015 yeGemini
Stuffy ekhaleni kwiintsana
UMarilyn Monroe, iMfihlelo yezobuGcisa
Indlela yokukhetha ukunqunyulwa kweenwele kumntwana
Ilanga lemile utamatisi ekhaya ekhaya ebusika. Ukupheka kwezitamatisi ezomileyo ezivela kuJulia Vysotskaya, kwioli, kwi-oven, elangeni